$यौ*न संसारमा डुबिरहँदा महिलाले एक्कासी किन भन्छन् ड्याडी ? उक्त समयमा कुन कुन शब्द बढी बोलीन्छ ? – दैनिक नेपाल न्युज
एजेन्सी केही महिलाहरूले $यौ*न सम्पर्क राख्दै गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई ‘ड्याडी’ सम्बोधन गर्ने गरेको लाइफ स्टाइल साइटका लागि गरिएको एक अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेको छ। ‘ड्याडी’ को सामान्य अर्थ पिता हुने भएकाले पनि निकै रोमान्चित हुँदै यौ*न संसारमा डुबिरहँदा यस शब्दको प्रयोगका कारण पुरुषहरूको उत्साह नै सेलाउने गरेको पनि यस अनुसन्धानले जनाएको छ।
अनुसनधानकर्ता वेथी स्क्वायर्सले यौ*न सम्पर्कका बेला एकले अर्कालाई ‘वेवी, हनी, लिल पुडिन’ जस्ता नामले सम्बोधन गर्नु चाहीं सामन्य नै भएको बताउँछिन्। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
तर सेक्स थेरापिस्ट भेनेसा मरिनले ‘ड्याडी’ भन्नुको अर्थ महिलाहरूले आफूमाथि पुरुषबाट पूर्णनियन्त्रित हुने इच्छा व्यक्त भएको बताएकी छिन्। साथै उनले ड्याडीको अर्थ पिता मात्र नभइ रक्षक, बोस, इन्चार्ज वा कुनै राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पनि हुने गरेको बताएकी छिन्।